घर मर्मतको काम भइरहेको थियो तर अस्वभावीक रुपमा घरमा अनौठा किराहरु निस्किरहे ,खाडल खोनेर हेर्दा त्यहाँ देखिएको दृष्यले सबैको होस उड्यो !!!! – News Nepali Dainik
घर मर्मतको काम भइरहेको थियो तर अस्वभावीक रुपमा घरमा अनौठा किराहरु निस्किरहे ,खाडल खोनेर हेर्दा त्यहाँ देखिएको दृष्यले सबैको होस उड्यो !!!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: १०:५०:२८
शिवनगर कालोनीमा मंगलबार दिउँसो मर्मतको क्रममा तीनवटा मानव कं का ल फेला परेका हुन् ।
प्रहरीले दाबी गरेको छ कि घरका पूर्व मालिक अहनन सैफी घटना पछि अर्की प्रेमिकाका साथ बस्दै आएका थिए । कांशीराम मम्देवपुरको शहरी आवास योजनामा ​​भाडाको घरमा उनी नयाँ परिवारका साथमा बस्दै थिए। सैफीले त्यहाँ सिकर्मीको रूपमा काम गर्न शुरू गरे ।
पूर्व जग्गा मालिक अहसन उत्तर प्रदेशको भदोहीबाट पक्राउ परेका हुन्। उनीसँग सोधपुछ भइरहेको छ ।
Last Updated on: March 26th, 2021 at 10:50 am